Ogaden News Agency (ONA) – Siyaasi Somali kamid ah Xisbiyada Wadanka Sweden oo lagu jidh dilay Gudaha Ogadeniya
Siyaasi Somali kamid ah Xisbiyada Wadanka Sweden oo lagu jidh dilay Gudaha Ogadeniya
Posted by ONA Admin	/ July 15, 2013
Qurba Joogti Nabada Loo sheegay oo Ogadeniya lagu Jidh dilayo markay tagaan. Beenti Gumeysiga oo soo afjarantay. Qurba joogta lageeyo Ogadeniya looma ogola inay dhaafaan Jig Jiga iyo Addis Ababa. Dadka iskudaya inay gudaha hoose Ogadeniya u gudbaan dhibaatada loo geysto waxaa markhaati ka noqon kara Siyaasigan somaliyeed ee lagu jidh dilay dhulka Ogadneiya
Stolkhlom: Nin u dhashay dhulka Somalida Ogadeniya islamarkaasna ku nool wadanka Sweden kana mid ah Xisbiga “The Green Party” ayaa waxaa lagu jidh dilay gudaha Ogadeniya.
Ninkan ayaa sida ay kuwarameen saxaafada Wadanka Sweden waxa uu fasax u kaxeeyay qoyskiisa oo ka kooban 9 ilmood oo uu dhalay. Ninkan ayaa waxaa qabtay 8 nin oo kamid ah ciidamada gumeysiga Ethiopia iyaga u kaxeystay goob ciqaabeedka lagu jidh dilo dadka.
Muwaadinkan dhalashada Swedishka heysta ayaa walaalkiis u sheegay in si aad u daran loo jidh dilay lagana tuuray gaadhi xoog u soconaya. Waxa uu sheegay in uusan socon karin oo aad u liito.
Safaarada Wadanka Sweden ayaa sheegtay inay kawarhayaan in muwaadin sweden ah lagu qabtay wadanka Ogadneiya halkaasna lagu xidhay balse eega lasoo daayay. Waan la socon doona xaalada ninkaas iyo waxa kasoo kordha
Sidoo kale gudomiyaha Xisbiga The Green Party ee wadanka Sweden ayaa sheegay inay wax kasta oo awoodada ah ay ka geysan doonaan xaalada ninkan ku suganyahay.
Siyaasigan ayaa waxaa jidh dilka markii loo geysanayay waxaa lagu hor ciqaabayay caruurtiisa oo daawanaysa.
Sida uu sheegay Walaalka la dhashay siyaasigan oo ku sugan wadanka Sweden. Waxaa falkan ka danbeeyay Cabdi ilay iyo Cabdullaahi Ethiopia oo amar kusoo bixiyay in ninkaas la qabto jidh dilna loo geysto.